Tsy misy dibera eny @ mpivarotra! | news2dago |
Tsy Misy Dibera Eny @ Mpivarotra!
news2dago 22 Aogositra, 2008 14:31 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Matetika moa ny zavatra rehefa tina asondro-bidy dia somary afenina kely na tsy apoitra eny @ etezera fa lazaina oe lany dia avy eo misondrotra ny vidiny. Tsapa mantsy tato ato izay fa lany ny dibera tiko tsy misy afa tsy io mantsy no tena malaza ka miandry izay fisiny sisa. Ny nividianako farany izao dia t@ zoma lasa teo ary 2000 Ar ny 250g. Voalaza moa fa toa oe simba nga hono ny milina mpamokatra azy ity any Antsirabe any.
Ny vaovao hafa moa dia tsy misy lasatsy ao Maevatanana ka mihitsoka ao daholo ny akamaron'ireo mpanao vakansa avy any mahajanga. Mila mihomana mitondra solika @ zerikana izany izay mikasa ny ho any @ iny faritra iny mba tsy ho sahirana eny andalana eny.
Afa-baraka kosa ny eo @ tontolo ny fanatanjahatena satria dia novakiny minisitra Jean Louis Robinson batsilana ny tsy mety teo anivon'ny komity olimpika izay nanao fitsangatsanganana fotsiny no natao tany Beijing. T@ ireo olona 21 nofantenina ny ho any mantsy dia 6 monja no tena atileta ny ambony dia olona mpanaraka fotsiny. Tsy nisy mpanazatra, tsy nisy mpitsabo nohentina moa tany hoy ny minisitra. @ manaraka indray manarina.